Chemical Zita: Muchinjikwa-wakabatanidzwa Polyacrylic Acid Resin Molecular Maumbirwo: - [-CH2-CH-] N-COOH. Hunyoro hweMukati%: ≤2.0% Viscosity: 29400 ～ 39400 mPa.s Carboxylic acid Zvemukati%: 56.0-68.0% Heavy Metal (ppm): -20ppm Residual Solvents%: ≤60 ppm Hunhu: Iyo ine kugadzikana kwechigarire pane yakakwira viscosity , uye inonyanya kukodzera kutungamirwa nemuromo nekuda kwehuwandu hushoma hwezvakasara zvinonyungudika. Range reKushandisa: Oral mukutora, zvishoma manejimendi uye nyowani yekuendesa system, con ...
Ichi chigadzirwa acrylic acrylic yakasungwa allyl sucrose kana pentaerythritol allyl ether polymer. Zvinoenderana nechakaomeswa chigadzirwa, izvo zvemukati me carboxylic acid boka (- COOH) inofanira kunge iri 56.0% - 68.0%. Chemical Zita: Muchinjikwa-wakabatanidzwa Polyacrylic Acidha Resin Molecular Maumbirwo: - [-CH2-CH-] N-COOH Chitarisiko: Chena isina hupfu hwehupfu PH Kukosha: 2.5-3.5 Mvura ine hunyoro%: ≤2.0% Viscosity: 30000 ～ 40000 mPa.s Carboxylic Asidhi Yemukati%: 56.0-68.0% Heavy Metal (ppm): -20ppm Residual Solvents%: -20ppm Hunhu: Iyo h ...
Chemical Kuumbwa: ethylene oxide condensate Rudzi: nonionic Tsanangudzo: PEG200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Main Mafomu: Mvura yemumuromo Inonyanya kushandiswa pamuromo mhinduro uye mamwe emvura solvents, kunyanya ine yakanaka solubilization yepropolis iri mune yepropolis akateedzana ezvehutano-zvigadzirwa, semuenzaniso, yemuromo propolis, nyoro macapsule uye zvichingodaro. Kurongedza Nzira: 50kg epurasitiki dhiramu pasherufu hupenyu: Makore matatu Hunhu Standard: CP2015 Kuchengeta ...
Main Mafomu: Ichi chigadzirwa hachisi chepfu, hachigumbure uye chine yakanaka mvura solubility, kuenderana, lubrication, adhesion uye kupisa kwemafuta. Nekudaro, iyo PEG-300 akateedzana akakodzera kugadzirira zvakapfava makapisi. Iyo ine yakafambidzana inoenderana nemhando dzakasiyana dzemanyoro, saka yakanaka solvent uye solubilizer uye inoshandiswa zvakanyanya mukugadzirisa kwemvura, senge mhinduro yemuromo, madonhwe eziso, etc. Kurongedza Nzira: 50kg epurasitiki dhiramu Shelf Hupenyu: Makore matatu Hunhu Yakajairwa: CP2015 Kuchengeta uye ...
Main Kushanda: Mahwendefa, firimu-jasi, mapiritsi, macapsule, suppositories zvichingodaro. Segadziriro yekugadzira, iko kwepurasitiki yeiyo polyethylene glycol, kugona kwayo kugadzirisa mapiritsi 'kugona kuburitsa zvinodhaka pamwe neEGEG (PEG4000 neEGEG6000) ine huremu huremo hunorema hunobatsira sekunamatira kugadzira mapiritsi. Iyo polyethylene glycol ine inopenya uye inotsvedzerera pamusoro uye yakaoma kukuvadza. Uye zvakare, mashoma maEGE (PEG4000 uye PEG6000) ane akakwirira mamorekuru uremu anogona kudzivirira kubatana ...
Carbopol, inozivikanwawo se carbomer, ndeye acrylic crosslinking resin yakakwenenzverwa neacrylic acrylic ne pentaerythritol zvichingodaro. Iyo yakakosha rheology mutongi. Mushure mekusatenderedza, Carbomer inoyevedza matrix ejeli ine kuomesa, kumisa uye kumwe kushandiswa kwakakosha. Iyo ine yakapusa maitiro uye kugadzikana kwakanaka. Inoshandiswa zvakanyanya mu emulsion, kirimu uye gel. Chemical Zita: Muchinjikwa-wakabatanidzwa Polyacrylic Acid Resin Molecular Maumbirwo: - [-CH2-CH-] N-COOH Chitarisiko: chena yakasununguka powde ...
Chemical Zita: Muchinjikwa-wakabatanidzwa Polyacrylic Acid Resin Molecular Maumbirwo: - [-CH2-CH-] N-COOH Chitarisiko: Chena yakasununguka upfu PH Kukosha: 2.5-3.5 Mvura Yemukati%: ≤2.0% Viscosity: 2000 ～ 11000 mPa.s Carboxylic Acid Zvemukati%: 56.0-68.0% Heavy Metal ppm: ≤20ppm Residual Solvents%: p60ppm Yakakurudzirwa muyero weCarbopol 971: 0.2-1.0% Electrolyte ine ganda rekuchengetedza emulsion, kirimu, yakajeka gel rine doro, yakajeka ganda rekuchengetedza gel gel, shampoo uye gel yekugezera. Hunhu ...
Carbopol 941: kuyerera kwenguva refu, yakaderera viscosity, kujekesa kwakakwirira, zvine mwero kuramba ion uye shear kuramba, yakakodzera gel uye emulsion. Chemical Zita: Muchinjikwa-wakabatanidzwa Polyacrylic Acid Resin Molecular Maumbirwo: - [-CH2-CH-] N-COOH Chitarisiko: chena yakasununguka upfu PH Kukosha: 2.5-3.5 Mvura Yemukati%: ≤2.0% Viscosity: 4000 ～ 11000 mPa.s Carboxylic Acid Zvemukati%: 56.0-68.0% Heavy Metal (ppm): -20ppm Residual Solvents%: ≤0.2% Chigadzirwa Lntroduction Chigadzirwa ichi iacrylic polymer ine polyenyl ether muchinjiko ...
Carbopol, inozivikanwawo se carbomer, ndeye acrylic crosslinking resin yakakwenenzverwa neacrylic acrylic ne pentaerythritol zvichingodaro. Iyo yakakosha rheology mutongi. Mushure mekusatendeseka, Carbomer inoyevedza gel matrix ine kukora nekumisa. Icho chiri nyore, chakatsiga uye chinoshandiswa zvakanyanya mu emulsion, kirimu uye gel. Chemical Zita: Muchinjikwa-wakabatanidzwa Polyacrylic Acid Resin Molecular Maumbirwo: - [-CH2-CH-] N-COOH Chitarisiko: chena yakasununguka upfu PH Kukosha: 2.5-3.5 Mvura Yemukati%: ≤2.0% ...
Carbopol 934: yakakwenenzverwa polyacrylic acid resin, yemunharaunda dhiraini sisitimu, yakagadzika pakakwirira viscosity, inoshandiswa kune gel, emulsion uye kumiswa. Chemical Zita: Muchinjikwa-wakabatanidzwa Polyacrylic Acid Resin Molecular Maumbirwo: - [-CH2-CH-] N-COOH Chitarisiko: Chena isina pfumbu PH Kukosha: 2.5-3.5 Mvura Yemukati%: ≤2.0% Viscosity: 30000 ～ 40000 mPa.s Carboxylic Acid Zvemukati%: 56.0-68.0% Heavy Metal (ppm): -20ppm Residual Solvents%: -0.2% Hunhu: Kuomesa mhedzisiro kwakanaka, uye inogara ...
Polyethylene glycol anoshandiswa nevakawanda mishonga mishonga, akadai jekiseni, kukamura uchishandisa mishonga, ophthalmic kugadzirira, nomumukanwa uye rectal kugadzirira. Solid giredhi polyethylene glycol inogona kuwedzerwa nemvura polyethylene glycol kugadzirisa viscosity yemusoro wemafuta; polyethilini glycol musanganiswa inogona kushandiswa seyakawedzera matrix; polyethylene glycol aqueous solution inogona kushandiswa sekumisa rubatsiro kana kugadzirisa viscosity yemamwe midhiya ekumisa; polyethylene glycol uye iwe ...
Carbomer 980 inowanzo shandiswa carbomer zvinhu. Carbomer yakakwira mamorekuru polymer eacrylic acry allylic sucrose kana pentaerythritol allyl ether. Inowanzo kusununguka chena micro acidic poda. Inogona kuburitsa yakakwenenzverwa thickening pasi yakaderera chipimo chemushonga, nokudaro kugadzira yakafara viscosity renji uye rheological ehupfumi emulsion, kirimu, gel uye transdermal gadziriro. Hunhu hweakasiyana carbomer akasiyana zvishoma. Mhando dzakasiyana dzinomiririra viscosities dzakasiyana, saka ivo ...